Levocetirizine (လီဗိုစီထရယ်ဇင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Levocetirizine (လီဗိုစီထရယ်ဇင်း)
Levocetirizine (လီဗိုစီထရယ်ဇင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Levocetirizine (လီဗိုစီထရယ်ဇင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Levocetirizine (လီဗိုစီထရယ်ဇင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Levocetirizine သည် antihistamine ဟုခေါ်သော histamine ဆန့်ကျင်ပစ္စည်းဖြစ်ကာ အယ်လ်လာဂျီ(ဓါတ်မတည့်ခြင်း) လက္ခဏာများဖြစ်သော မျက်ရည်ထွက်ခြင်း၊နှာစေးခြင်း၊မျက်စိ/နှာခေါင်း ယားခြင်း၊ယားယံခြင်း၊အင်ပြင်ထခြင်း စသည်တို့ကို သက်သာစေသည်။ ၎င်းသည် ဓါတ်မတည့်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်ပါက ခန္ဓါကိုယ်ထဲတွင် ထွက်ပေါ်လာသော histamine ဟုခေါ်သည့် ဓါတ်တမျိုးကို ပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့် အာနိသင်ပြပါသည်။
Levocetirizine (လီဗိုစီထရယ်ဇင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
levocetirizine ကို အစာရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း (ပုံမှန်အားဖြင့် ညနေဖက်တွင် တကြိမ်) သောက်ရသည်။ ဆေးရည်အသုံးပြုပါက ဆေးပမာဏကို မတိုင်းတာမီ ဆေးပုလင်းကို ကောင်းစွာလှုပ်ပါ။။ ဆေးနှင့်အတူပါလာသည့် ဇွန်းသို့မဟုတ် ခွက်ကို အသုံးပြုပြီး ဆေးပမာဏကို တိုင်းတာပါ(အိမ်သုံးဇွန်းကို မသုံးရပါ)။ တိုင်းတာရန် ပစ္စည်းမရှိပါက ဆေးဆိုင်တွင် တောင်းယူပါ။ ဆေးပမာဏ အနည်အများသည် သင်၏ ရောဂါအခြေအနေ၊အသက်အရွယ် နှင့် ဆေးကို တုန့်ပြန်မှုအပေါ် မူတည်သည်။ ဆရာဝန် ညွှန်ကြားထားသည်ထက် ပမာဏပိုသောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အကြိမ်ရေပိုသောက်ခြင်းများ မပြုရပါ။ ရောဂါအခြေအနေ မသက်သာလျှင် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာလျှင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
Levocetirizine (လီဗိုစီထရယ်ဇင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Levocetirizine ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Levocetirizine ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Levocetirizine ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Levocetirizine ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Levocetirizine ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Levocetirizine (လီဗိုစီထရယ်ဇင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
levocetirizine ကို မသောက်သုံးမီ အောက်ပါအချက်များရှိပါက ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
-levocetirizine၊ Cetirizine (Zyrtec) သို့မဟုတ် အခြားသော levocetirizine များနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းများရှိလျှင်။
စိတ်ကျရောဂါအတွက်ဆေးများ၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းအတွက် levocetirizine ၊စိတ်ဝေဒနာများအတွက် အသုံးပြုသော ဆေးများ၊ အတက်ရောဂါတွင် အသုံးပြုသော ဆေးများ၊ritonavir (Norvir, in Kaletra)၊ အိပ်ဆေး၊စိတ်ငြိမ်ဆေးများ၊ theophylline (Theochron, Theolair)
-ကိုယ်ဝန်ရှိနေလျှင် (အထူးသဖြင့် လ အတော်ရင့်နေလျှင်)၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် အစီအစဉ်ရှိလျှင် သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေလျှင်၊ဆေးသောက်နေရင်း ကိုယ်ဝန်ရှိလာလျှင် ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောပါ။ levocetirizine သောက်ရင်း မိခင်နို့မတိုက်ရပါ။
-levocetirizine သည် ငိုက်မျဉ်းစေသဖြင့် ဆေး၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို သေချာစွာ မသိရှိသေးလျှင် ကားမောင်းခြင်း သို့မဟုတ် စက်ကိရိယာအကြီးစားများ မောင်းနှင်ကိုင်တွယ်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။
-အရက်သည် levocetirizine ကြောင့်ဖြစ်သော ငိုက်မျဉ်းမှု ကို ပိုဆိုးစေသဖြင့် အရက်သေစာသောက်စားခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး သင့်ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Levocetirizine (လီဗိုစီထရယ်ဇင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Levocetirizine (လီဗိုစီထရယ်ဇင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ပါလက္ခဏာများ ခံစားရပါက levocitirizine သောက်သုံးခြင်းကို ချက်ချင်းရပ်ပြီး ဆရာဝန်နှင့် အမြန်ပြသပါ။
-နှာခေါင်းသွေးလျှံခြင်း (အထူးသဖြင့် ကလေးများတွင်)။
-နားထဲတွင် နာကျင်ခြင်း၊နားထဲပြည့်ကြပ်နေသကဲ့သို့ ခံစားရခြင်း၊ အကြားအာရုံဆိုင်ရာ ပြဿနာများ။
-နှုတ်ခမ်း နှင့် ပါးစပ်တဝိုက်တွင် ထုံနာကျဉ်နာဖြစ်ခြင်း။
-(အသား သို့မဟုတ် မျက်ဖြူသား) ဝါခြင်း။
-ဆီးကျဉ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆီးသွားရခက်ခြင်း။
-ဆီးအရောင်မည်းခြင်း၊ ဝမ်းသွားလျှင် အနံ့ဆိုးခြင်း။
အခြားသော ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသည့် လက္ခဏာများမှာ
ဘယ်ဆေးတွေက Levocetirizine (လီဗိုစီထရယ်ဇင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Levocetirizine ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ အထူးသဖြင့်
-အအေးမိအဖျားပျောက်ဆေးများ၊ အိပ်ဆေးများ၊ narcotic အုပ်စုဝင် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ၊စိတ်ငြိမ်ဆေးများ၊ကြွက်သားပျော့ဆေးများ၊ အတက်ကျဆေးများ၊စိတ်ကျရောဂါ တွင်သုံးသော ဆေးများ၊စိုးရိမ်စိတ်များခြင်း အတွက်သုံးသော ဆေးများ စသည့် ဆေးများသည် levocitirizine ၏ ငိုက်မျဉ်းစေမှုကို ပိုဆိုးစေပါလိမ့်မည်။
-သင်သုံးစွဲနေသော levocitirizine များအားလုံးကို ဆရာဝန်အား ပြောပြပါ။ ထို့အပြင် levocitirizine သောက်နေစဉ်ကာလအတွင်း စသောက်သော သို့မဟုတ် ရပ်လိုက်သော ဆေးများရှိလျှင်လည်း ဆရာဝန်အား အသိပေးပါ (အထူးသဖြင့် ritonavir (Norvir, Kaletra) သို့မဟုတ် theophylline (Aquaphyllin, Asmalix, Elixophyllin, Theolair, Theosol))
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Levocetirizine (လီဗိုစီထရယ်ဇင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Levocetirizine က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Levocetirizine (လီဗိုစီထရယ်ဇင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Levocetirizine ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့်
-ကျောရိုးအာရုံကြောမကြီးတွင် ဒါဏ်ရာရထားခြင်း —–> ဆီးမသွားနိုင်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သဖြင့် သတိနှင့်သုံးပါ။
-ကျောက်ကပ်ရောဂါ —-> သတိဖြင့်အသုံးပြုပါ။ ခန္တာကိုယ်ထဲမှ ဆေးစွန့်ပစ်မှုကို နှေးစေသဖြင့် ဆေး၏အာနိသင်မှာ ခန့်မှန်းထားသည်ထက် များလာနိုင်သည်။
-ဆီးမသွားနိုင်ခြင်း —->အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေနိုင်သဖြင့် သတိဖြင့် သုံးပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Levocetirizine (လီဗိုစီထရယ်ဇင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ Levocetirizine ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
-(ဓါတ်မတည့်ခြင်းကြောင့်) နှာစေးခြင်းအတွက် :
ရာသီအကူးအပြောင်းတွင်နှာစေးခြင်း နှင့် ကာလရှည် နှာစေးခြင်းအတွက်၊ အကြောင်းအရာ မည်မည်ရရမရှိဘဲ ကာလကြာရှည်စွာ အင်ပြင်များ ထွက်ခြင်းအတွက် : ၅ မီလီဂရမ်ကို ညနေဖက်တွင် တကြိမ်သောက်ရမည်။
-အင်ပြင်များ ထွက်ခြင်းအတွက် : ၅ မီလီဂရမ်ကို ညနေဖက်တွင် တကြိမ်သောက်ရမည်။
ကလေးတွေအတွက် Levocetirizine (လီဗိုစီထရယ်ဇင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ရာသီအကူးအပြောင်းတွင် နှာစေးခြင်းအတွက် :
၁၂နှစ် နှင့် အထက် : ၅ မီလီဂရမ်ကို ညနေဖက်တွင် တကြိမ်သောက်ရမည်။
၆နှစ် မှ ၁၁နှစ် အထိ : ၂.၅ မီလီဂရမ်ကို ညနေဖက်တွင် တကြိမ်သောက်ရမည်။
၂နှစ် မှ ၅နှစ်အထိ : ၁.၂၅ မီလီဂရမ်ကို ညနေဖက်တွင် တကြိမ်သောက်ရမည်။
-ကာလရှည် နှာစေးခြင်းအတွက် နှင့် အကြောင်းအရာ မည်မည်ရရမရှိဘဲ ကာလကြာရှည်စွာ အင်ပြင်များ ထွက်ခြင်းအတွက် :
၆လ မှ ၅နှစ်အထိ : ၁.၂၅ မီလီဂရမ်ကို ညနေဖက်တွင် တကြိမ်သောက်ရမည်။
-အင်ပြင်များ ထွက်ခြင်းအတွက် :
Levocetirizine (လီဗိုစီထရယ်ဇင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Levocetirizine ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
-သောက်ဆေးပြား : ၅မီလီဂရမ်။
-သောက်ရန် ဆေးရည် : 0.5mg/ml
Levocetirizine ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Levocetirizine (Oral Route). http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/levocetirizine-oral- route/description/drg-20071083. Accessed June 26,2016.
Levocetirizine. https://www.drugs.com/mtm/levocetirizine.html. Accessed June 26,2016.
Xyzal | Side Effects, Dosage, Uses &amp;More.
http://www.healthline.com/drugs/levocetirizine/oral-tablet/xyzal#Highlights1. Accessed June 26, 2016.
အရေပြားကျန်းမာရေး, ကလေးကျန်းမာရေး, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း